Home»Entries posted by Baashi
Real Madrid oo shaacisay maaliyada ay ku ciyaari doonto kama dambeysta Champion League
By Baashi on May 25, 2017 CIYAARAHA Xiriirka qaaradda yurub ee UEFA ayaa Juventus fursad u siiyay in loo tixgeliyo kooxda minanka kulanka final-ka madama lagu go’aamiyay isku aadkii semi final-ka waxeyna xiran doonaan maaliyadda ay caanka ku yahiin ee Cadaan iyo madowga halka Real Madrid ay xiran doonto maaliyadda buluug ah. Real Madrid ayaa si daran u rabtay iney ku ciyaarto […]
By Baashi on May 25, 2017 CIYAARAHA Juventus ayaa kula xifaaltami doonto Manchester United & Tottenham saxiixa weeraryahanka Bayern Munich Douglas Costa oo 26-jir ah. (La Stampa). Everton ayaa dhageysan doonta dalabyada laga soo gudbinay 23-jirkooda Ross Barkley, balse waxey ku dooneysaa 50 Malyan oo Pound waxaana xiiseynaya United & Spurs. (Mirror). Man United ayaa u dhaqaaqday xidiga khadka dhexe Bayern Munic […]
Warbixin Xiiso leh oo ku saabsan Koobkii ay xalay ku guuleeysatay United ee Europa LEAGUE+ Sawiro
By Baashi on May 25, 2017 CIYAARAHA Laba gool oo ay labadii qeyb e ciyarta kala dhaliyeen Paul Pogba iyo Henrikh Mkhitaryan ayaa Man United ka saaciday iney guul ka gaarto Ajax isla markaana ku guuleysato koobka UEFA Europa League. Red Devils si rasmi ah ayey kaga qeyb gali doontaa Champions League xilli ciyaareedka soo aadan, waxeyna ka mid noqotay shan kooxood […]
Carvajal oo ku baasay tijaabo caafimaad, miyuu diyaar u yahay Finalka Cardiff?
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Wargeyska Marca ayaa sheegay in daafaca garabka Midig Dani Carvajal oo ku baasay tijaabo caafimaad islamarkaasna uu si buuxdo ugu soo laabtay Tababarka ciyaartoyda Real Madrid isugu diyaarinayaan kulanka Finalka Champion league ee Cardiff ka dhici doonaa 3da Bisha soo socota Carvajal ayaa dhaawacmay Bishii May 2deeda markaasoo kooxdiisa ay la ciyaareysay kooxda ay xifaaltamaan […]
Warbixin: Maxeey Barcelona ugu guul dareeysatay La Liga Sanadkaan?
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Real Madrid oo mudo sanado ah u oomaneed ku guuleeysiga La Liga ayaa xili ciyaareedkan ka fara marjiisatay Barcelona oo waayadiiugu dambeeyay iska dal dalaneeysay. In Real Madrid ku guuleeysato La Liga ma aheen wax sahlan, maxaa yeelay Zidane iyo wiilashiisa waxeey muujiyeen dadaalkii ay ku hanan lahaayeen, iyagoo muujiyay isku duubni iyo dadaal dheeraad […]
Paulo Dybala oo Messi u sheegay hadal aad u niyad jabiyay
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Xidiga Juventus iyo xulka Argentine Paulo Dybala ayaa lagu soo waramayaa in xidiga ay isku wadanka yihiin ee Barcelona Lionel Messi uu u sheegay inuu jeclaan lahaa ku biirista Real Madrid. Barcelona iyo Real Madrid ayaa si weyn u doonaya xidiga Juventus kaasoo qeyb weyn kulahaa ololaha Juventus ee xili ciyaareedkaan isagoo 46 kulan ku […]
Waa imisa mushaarka uu Griezmann sanadkii qaadan doono hadii uu United ku biro?
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Sida uu qoray wargeyska Marca ee Spain kazoo baxa Antonio Griezmann ayaa sanadkii 14 million euros qaadan doona hadii uu ku biro Manchester United xagaagan. Xidiga Atletico Madrid iyo xulka Faransiiska ayaa lagu wadaa inuu aduun dhan 100 million ugu wareego Manchester United oo si weyn loola xariirinayay xagaagan. Intaas waxaa sii dheer in Antoine […]
Real Madrid oo si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Vinicius Jr
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Kooxda cad cadka ayaa ku dhawaaqday inay dhammeystirtay saxiixa Neymar-ka cusub ee kubadda cagta wiilka usoo baxaya dalka Brazil ee lagu magacaabo Vinicius Junior kaasoo u ciyaara kooxda Flamengo, wuxuuna heshiiskaani meelmari doonaa bisha July sannadka 2018ka. Vinicius ayaan sidaas darteed u ciyaari doonin kooxda heysata horyaalka La Liga illaa uu ka 18 sanno jirsado. […]
City oo 100 milyan kusoo qaadaneysa 2 xidig oo Arsenal & Tottenham katirsan
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Man City ayaa dooneysa inay dhabarka ka jebiso kooxaha kula xifaaltama horyaalka England Premier League, waxayna xagaagaan lasoo wareegeysaa Alexis Sanchez iyo Kyle Walker, iyadoo heshiiskoodu uu wadar ahaan ku kacayo 100 milyan oo ginni, sida laga soo xigtay majaladda Daily Mirror. Tababaraha kooxda Citizens Pep Guardiola ayaa u sheegeya maamulka kooxdiisa in labada saxiix […]
Wax walbo oo aad uga baahantahay kulanka Finalka Europa League ee caawa dhex mari doona United & Ajax
By Baashi on May 24, 2017 CIYAARAHA Man United ayaa dooneysa inay qaado koobkaan markeedii ugu horreysay taariikhda, halka kooxda reer Holland ee Ajax ay raadineyso hanashada koobkeedii ugu horreeyey ee weyn ee Yurub ah tan iyo sannadkii 1995tii. Si kastaba ha ahaatee, waxaa kale oo xusid mudan in kooxda ku guuleysata finalkaan ay boos ka heli doonto heerka guruubyada tartanka UEFA […]
Next »	SI AAD WAR DEG DEG AH U HESHO RIIX LIKE